Nabumetone vs. ibuprofen: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट भारी खेल चेकआउट औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण खेलहरु कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Nabumetone vs. ibuprofen: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेन नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) हो जुन गठियाबाट पीडा र सूजनको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुबै नाब्युमेटोन र आईबुप्रोफेन जेनेरिक औषधि हुन् जसले प्रोस्टाग्लैन्डिनको अवरोधलाई रोक्दछन्, जुन शरीरमा सूजन र दुखाइका लागि आंशिक रूपमा जिम्मेवार पदार्थ हुन्।
Ibuprofen nabumetone भन्दा बढी परिचित घरको नाम हुन सक्छ। यद्यपि दुबै एनएसएआईडीहरू अस्थियोआर्थराइटिस र रुमेटाइड गठियाको लागि जोर्नीहरूमा दुखाइ र कठोरता कम गर्नका लागि प्रभावकारी छन्। यी औषधिहरू बीचको अन्य महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरूको बारेमा जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
Nabumetone अब बन्द छ, Relafen को सामान्य नाम हो। यो एक डाक्टरको प्रिस्क्रिप्शनको साथ उपलब्ध छ र मुख्यत: अस्थिरोथराइटिस र संधिशोथको दुखाइको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामान्य nabumetone ट्याब्लेटहरू mg०० मिलीग्राम र 5050० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छन्। नाबुमेटोनको विशिष्ट खुराक प्रति दिन २००० मिलीग्राम एक पटक वा दुई पटक खुराकको रूपमा लिइन्छ।
इबुप्रोफेन एडवेल र मोट्रिन जस्ता लोकप्रिय ब्रान्ड नामहरू द्वारा परिचित छन्। Nabumetone विपरीत, आईबुप्रोफेन एक प्रिस्क्रिप्शन वा ओभर-द-काउन्टर (OTC) पीडा रिलीभरको रूपमा उपलब्ध छ। जबकि इबुप्रोफेनले जोर्नीशोथबाट पीडाको उपचार गर्न सक्छ, यो ज्वरो, मासिक दर्द र टाउको दुख्ने वा पीठ दुखाई दुखाई को उपचार पनि गरीन्छ। इबुप्रोफेन सामान्यतया प्रत्येक छ देखि आठ घण्टा लिन्छ शक्ति र गठन मा निर्भर गर्दछ।
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ औषधि (NSAID) Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ औषधि (NSAID)
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति जेनेरिक उपलब्ध; ब्रान्ड नाम बन्द छ ब्रान्ड र जेनेरिक उपलब्ध
ब्रान्ड नाम के हो? Relafen एडभिल, मोट्रिन, मिडोल
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट मौखिक क्याप्सूल
मानक खुराक के हो? प्रति दिन १००० देखि २००० मिलीग्राम एक वा दुई खुराकमा विभाजित १२०० देखि 00२०० मिलीग्राम प्रति दिन तीन वा चार खुराकमा विभाजित
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? उपचार अवधि स्वास्थ्य अवस्था, पीडाको गंभीरता, र अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। उपचार छोटो अवधि वा लामो-अवधि हुन सक्छ। उपचार अवधि स्वास्थ्य अवस्था, पीडाको गंभीरता, र अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। उपचार छोटो अवधि वा लामो-अवधि हुन सक्छ। आइबुप्रोफेनको ओटीसी फारम १० दिन भन्दा बढि लिन हुँदैन स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श नगरी।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू वयस्क र बच्चाहरु months महिना र माथिका
शर्तहरु nabumetone र आइबुप्रोफेन द्वारा उपचार
Nabumetone र Ibuprofen दुबै एफडीए हल्का देखि मध्यम दुखाइ र सूजन को उपचार को लागी अनुमोदित छन् ओस्टियोआर्थराइटिस र संधिशोथ । ओस्टियोआर्थराइटिस र संधिशोथ पुरानो अवस्था हो जसले जोर्नीहरूलाई असर गर्दछ; यद्यपि, ओस्टियोआर्थराइटिस समयको साथसाथै जोर्नीहरूको वरिपरि कार्टिलाज बिच्छेदनको रूपमा चिनिन्छ जब कि संधिशोथले जोर्नीहरूलाई आक्रमण गर्दा संधिशोथ विकास हुन्छ।
NSAIDs को रूपमा, nabumetone र ibuprofen ले हल्का देखि मध्यम दुखाइको पनि उपचार गर्न सक्दछ। अझ विशेष गरी, NSAIDs ले टाउको दुख्ने, घाँटी वरिपरि मस्कुलोस्केलेटल दुखाइ, र तल्लो पीठ दुख्ने उपचार गर्न सक्छ। जबकि आईबुप्रोफेन एफडीएलाई पीडा, ज्वरो, र मासिक धर्म क्रम्प्स (प्राथमिक डिस्मेनोरिया) को उपचार गर्न अनुमोदित छ, जबकि नाबुमेटोनलाई अफ-लेबल उपचारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सर्त Nabumetone इबुप्रोफेन
पीडा अफ-लेबल हो
ज्वरो अफ-लेबल हो
Nabumetone वा Ibuprofen अधिक प्रभावी छ?
Nabumetone र Ibuprofen प्रभावी NSAID पीडा रिलीभरहरू जब सिफारिसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधिहरू गठियाको दुखाइ र सूजनको उपचारको लागि एफडीए अनुमोदन गरिएको छ। अधिक प्रभावी NSAID एक हो जुन तपाईंको विशेष अवस्था र लक्षणहरूको लागि उत्तम काम गर्दछ।
एक अनियमित, नियन्त्रित क्लिनिकल परीक्षणमा, नाबुमेटोनलाई अन्य एनएसएआईडीहरूसँग तुलना गरिएको थियो जस्तै आइब्युप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, र डिक्लोफेनाक लगभग ,000००० अस्थिरिया वा रुमेटोइड गठियाका बिरामीहरूमा। पछि १२ हप्ता उपचार , अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि ओबियोप्रोफेन र अन्य एनएसएआईडीहरूको प्रभावकारितामा नैबुमेटोन पनि यस्तै थियो। यद्यपि उक्त अध्ययनले पत्ता लगायो कि नाबुमेटोन अन्य NSAID भन्दा बढी गठिया सम्बन्धी गठियाको लागि प्रभावकारी थियो।
Nabumetone सामान्यतया Ibuprofen र अन्य NSAIDs भन्दा काम गर्न लामो लिन्छ। यसले प्राय: एक हप्ता लिन सक्दछ nabumetone को लागी काम गर्न को लागी र दुई हप्ता सम्म पूर्ण लक्षण राहतको लागि। अर्कोतर्फ, इबुप्रोफेनले minutes० मिनेट देखि एक घण्टा भित्र काम गर्न सुरू गर्दछ, यद्यपि यो पूर्ण राहतको लागि प्रति दिन धेरै पटक लिन आवश्यक पर्दछ।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् तपाईको लागि उत्तम पीडा मुक्ति पाउनको लागि चिकित्सा सल्लाहको लागि। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंको पीडाको उपचार गर्न मद्दतको लागि ओभर-द-काउन्टर वा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दिन सक्छ।
कभरेज र लागत तुलना nabumetone बनाम आईबुप्रोफेन
धेरै मेडिकेयर र बीमा योजना जेनेरिक nabumetone कभर हुनेछ। Nabumetone को लागी कोपे, बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ तर to0देखि range 57 सम्म गर्न सक्दछ। बीमा बिना, nabumetone को औसत नगद मूल्य around ...। को आसपास छ। एक एकलकेयर नाबुमेटोन कूपनको साथ, तपाईं लाग्ने औषधि मूल्यमा बचत गर्नुहुन्छ र around 19 को आसपास भुक्तान गर्नुहुन्छ।
धेरै बीमा योजनाहरु आईबुप्रोफेन को ओभर-दि-काउन्टर संस्करण कभर छैन। जहाँसम्म, एक नुस्खा को साथ, सबै भन्दा चिकित्सा र बीमा योजना आईबुप्रोफेन कभर हुनेछ। आईबुप्रोफेनको औसत खुद्रा मूल्य pres० पर्ची-शक्ति ट्याब्लेटको लागि $ 50 को आसपास छ। एकलकेयर आईबुप्रोफेन कूपन कार्ड प्रयोग गरेर (आवश्यक पर्ची) आईपुप्रोफेनको लागत कम गर्न मद्दत गर्दछ।
मात्रा Tablets० ट्याब्लेट, mg०० मिलीग्राम Tablets० ट्याब्लेटहरू, .०० मिलीग्राम
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 57 $ 0– $ 22
एकलकेयर लागत $ १। + + +
नबुमेटोन बनाम आइबुप्रोफेनको साधारण साइड इफेक्टहरू
Nabumetone र Ibuprofen समान साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ। यी NSAID को सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट हुन्, अपच, पखाला, र कब्ज जस्तै। आइबुप्रोफेनको तुलनामा, नाबुमेटोनमा अपच, पेट दुखाइ, र पखाला हुने उच्च सम्भावना हुन सक्छ।
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेनका अन्य सम्भावित साइड इफेक्टहरूमा मतली, चक्कर आउने, हात वा खुट्टाहरूमा सूजन (एडेमा), टाउको दुख्ने, दाग, र टिनिटस समावेश छन्।
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेनको गम्भीर दुष्प्रभावहरूमा उच्च रक्तचाप, किडनी समस्या, हृदयघात, झड्का , र पेट वा आन्द्रा अल्सर एलर्जी प्रतिक्रिया पनि सम्भव छ। यदि तपाईले गम्भीर साइड इफेक्ट वा साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो जुन दृढ रहन वा बिग्रँदो छ भने तत्काल चिकित्सा सहायता लिनुहोस्।
अमेरिकी जनसंख्या को कति प्रतिशत मोटो छ
अपच हो १%% हो १% ––%
पेट दुख्ने हो १२% हो १% ––%
पखाला हो १%% हो १% ––%
मतली हो %% –%% हो १% ––%
कब्ज हो %% –%% हो १% ––%
चक्कर हो %% –%% हो १% ––%
इडेमा हो %% –%% हो १% ––%
टाउको दुखाई हो %% –%% हो १% ––%
पुराना हो %% –%% हो १% ––%
टिन्निटस हो %% –%% हो १% ––%
स्रोत: डेलीमेड ( Nabumetone ), डेलीमेड ( इबुप्रोफेन )
नबुमेतोन बनाम आईबुप्रोफेनको ड्रग अन्तर्क्रिया
एनएसएआईडीहरू सावधानीका साथ वारफेरिन र एस्पिरिन जस्ता औषधीहरूको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। एन्टीकोआगुलेन्ट्स वा एन्टिपालेटलेट ड्रग्स NSAID को साथ सेवन गर्दा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव र अल्सरको जोखिम बढ्न सक्छ।
NSAIDs को रक्तचाप बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण, रक्तचाप कम गर्ने औषधीहरू जस्तै लिजिनोप्रिल र लोसार्टनको असरहरू कम गर्न सकिन्छ यदि एनएसएआईडी र रक्तचाप औषधि एकसाथ लिएमा।
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेनले डायरेटिक औषधिहरूको प्रभाव घटाउन सक्छ। NSAIDs र मूत्रवर्धकहरूलाई सँगै लैजाँदा किडनीको कार्यको अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ।
लिथियम वा मेथोट्रेक्सेटको साथ नाबुमेटोन वा आइबुप्रोफेन लिदा शरीरमा लिथियम वा मेथोट्रेक्सेटको संचित तह हुन सक्छ। यसले लिथियम वा मेथोट्रेक्सेट विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ।
यो सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन।
औषधि औषधि वर्ग Nabumetone इबुप्रोफेन
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेनको चेतावनी
Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) हृदय घटनाहरु को जोखिम बढाउन सक्छ, जस्तै हृदयघात र स्ट्रोक। हृदय रोग वा उच्च रक्तचाप वा उच्च कोलेस्ट्रॉल जस्ता हृदय रोग को लागी जोखिम कारक संग, NSAID बाट जोगिनु पर्छ वा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नु पर्छ।
नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेन जस्ता औषधीहरूले पनि अल्सर र आन्द्रा ब्लीडिंग सहित जठरांत्र सम्बन्धी घटनाहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। बुढेसकालका बिरामीहरू र ग्यास्ट्रिक अल्सरको इतिहास भएकाले एनएसएआईडीहरू बेवास्ता गर्नुपर्दछ वा सावधानीको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ। जठरांत्र रक्तस्राव को घटना हुन सक्छ nabumetone संग थोरै कम आईबुप्रोफेनको भन्दा।
NSAIDs तरल पदार्थ प्रतिधारण, वा edema, र हृदय विफलता बिगार्न सक्छ। हृदय असफलताको इतिहास भएका बिरामीहरूलाई सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
NSAIDs को दीर्घकालीन उपयोगले समयको साथमा गुर्दालाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग NSAIDs प्रयोग गर्नु अघि मृगौला समस्याहरूको इतिहास छ। NSAIDs को प्रयोग गर्नु अघि अन्य सम्भावित साइड इफेक्ट वा प्रतिकूल घटनाहरूको बारेमा तपाइँको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्, जस्तै nabumetone वा ibuprofen।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू नाबुमेटोन बनाम आईबुप्रोफेनको बारेमा
नाबुमेटोन भनेको के हो?
Nabumetone एक सामान्य NSAID एनाल्जेसिक, वा पीडा निवारक हो। यो रेलाफेनका लागि जेनेरिक नाम हो, र केवल पर्चेको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ। Nabumetone अक्सर ओस्टियोआर्थराइटिस र संधिशोथ को उपचार गर्न मौखिक ट्याब्लेट को रूप मा एक वा दुई पटक लिन्छ।
इबुप्रोफेन एक NSAID को रूप मा काम गर्दछ अस्थिआर्थराइटिस वा संधिशोथ द्वारा उत्पन्न दुखाई र सूजन कम गर्न। यद्यपि यो दुखाई र ज्वरोको उपचार गर्नको लागि ओभर-द-काउन्टर औषधीको रूपमा उपलब्ध छ, यो अधिक गम्भीर दुखाइको उपचार गर्न उच्च शक्तिमा पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ। आईबुप्रोफेन मौखिक ट्याब्लेट, तरल समाधान, क्याप्सूल, र इन्जेक्शनको रूपमा आउँदछ। आईबुप्रोफेनको ब्रान्ड नामहरूमा एडवेल र मोट्रिन समावेश छन्।
के नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेन उस्तै छन्?
नाबुमेतोन र आईबुप्रोफेन समान छैन। जे होस् ती दुबै एनएसएआईडी दुबै राहत हुन्, नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेन फरक तरिकाले डोज गरिन्छ र थोरै फरक प्रभावहरू हुन सक्छ। एक नुस्खा आवश्यक Nabumetone, दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ जबकि काउन्टर मा उपलब्ध आईबुप्रोफेन, दिन भर मा प्राय: धेरै पटक लिइन्छ। दुबै नाबुमेटोन र इबुप्रोफेन उपचार गर्न सक्छन् पुरानो पीडा जोर्नीशोथबाट
Nabumetone वा Ibuprofen राम्रो छ?
प्लेसबोको तुलनामा, वा कुनै उपचार नै छैन, नाबुमेटोन र आइबुप्रोफेन दुबै जोर्नीशोथबाट पीडा र सूजनको उपचारको लागि प्रभावकारी छन्। Nabumetone यसको एक वा दुई पटक दैनिक खुराकको लागि प्राथमिकता हुन सक्छ। यद्यपि नाबुमेटोनमा आइबुप्रोफेन भन्दा बढी अपच हुने सम्भाव्यता हुन सक्छ र यो पर्चाको साथ मात्र उपलब्ध छ। राम्रो एनएसएआईडी तपाईको लागि सबैभन्दा कम लागत प्रभावी उपचार हो जुन तपाईको डाक्टरको सहयोगमा निर्धारण गरिएको छ।
के म गर्भवती हुँदा नाबुमेटोन वा आइबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
Nabumetone र ibuprofen, अन्य NSAIDs जस्तै, हुनु पर्छ ढिलो गर्भावस्था को समयमा जोगिन । ढिलो गर्भावस्थाको अवधिमा एनएसएआईडी लिनाले जन्म दोष र गर्भ तुहुने जोखिम बढाउन सक्छ। यदि तपाई एनएसएआईडी लिनु अघि स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म रक्सीको साथ nabumetone वा ibuprofen प्रयोग गर्न सक्छु?
निर्धारित रूपमा nabumetone वा Ibuprofen लिँदा اعتدالमा मदिरापान पिउनु सामान्यतया सुरक्षित हुन्छ। समस्याहरू सुरु हुन सक्दछ जब लामो अवधिमा NSAID को उपयोग अत्यधिक रक्सीको सेवनको साथ मिल्दछ। नियमित रूपमा NSAID को साथ रक्सी पिउँदा पेटको अल्सर, किडनी बिरामी, र अन्य प्रतिकूल साइड इफेक्टको बढेको जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
यसले काम गर्नका लागि कति समय लाग्छ?
यसले एक हप्ता लिन सक्दछ nabumetone को प्रभावहरु महसुस गर्न को लागी। केहि केसहरूमा, यसले दुई हप्ता वा अधिक लिन सक्दछ nabumetone बाट अधिकतम राहत महसुस गर्न।
के nabumetone ट्रामाडोल जस्तै छ?
Nabumetone एक nonsteroidal विरोधी भड़काऊ औषधि हो जबकि ट्रामाडोल एक ओपिओइड हो। ट्रामाडोललाई नाबुमेटोन भन्दा बढी शक्तिशाली रिलिभर मानिन्छ। नाबुमेटोनको तुलनामा, ट्रामाडोल अधिक गम्भीर प्रकारको पीडाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
के nabumetone ले वजन बढाउनको लागि गर्छ?
Nabumetone सामान्यतया वजन को एक आम साइड इफेक्ट को रूप मा पैदा गर्दैन। नाबुमेटोनबाट तौल बढ्नुले तरल पदार्थ बनाउने वा मुटुको असफलतालाई जनाउन सक्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तुरुन्त परामर्श लिनुहोस् यदि तपाई हात र खुट्टाहरूमा असामान्य वजन र सुजनको अनुभव गर्नुहुन्छ।
जेब अधिकतम बाहिर को तिर गणना
स्याउ साइडर सिरका कम रक्तचाप मद्दत गर्दछ
राती खोकी रोक्ने सबैभन्दा राम्रो तरीका
रोबिटसिन कोडीन बनाम कोमेडिन के साथ प्रोमेथाजिन
तौल घटाउनु मधुमेहको लक्षण हो